Motogrini E:mail – 🛵 လျှပ်စစ် Scooter 2020
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ Google Core Web Vitals ရမှတ်ကိုစမ်းသပ်ကြည့်ပါ။
All-in-one စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကို PageSpeed.PRO ဖြင့်စမ်းကြည့်ပါ
PageSpeed.PRO Optimization ဝန်ဆောင်မှု
🚚 ကုန်တင် Scooter
mm.e-scooter.co - လျှပ်စစ် Scooter 2020
အမြန် filter များ
🛵 စစ်ထုတ်ရန် ➜ ➜
ကို 8 နာရီ
ကို2kW (2.7 ကိုမြင်းကောင်ရေ)
✓ ကုန်တင် / Delivery
✓ Hub မော်တာ
25 နှင့် 45 km / h
ကို 500 သံသရာℹ
အဆိုပါအီး: မေးလ်ဆားဘီးယားကနေ E-Scooter ရှေ့ဆောင် Motogrini ကနေလျှပ်စစ်ဖြန့်ဝေ Scooter ဖြစ်ပါတယ်။ Motogrini စျေးကွက်တခုတခုအပေါ်မှာလျှပ်စစ် Scooter မိတ်ဆက်ကြောင်းဆားဘီးယားအတွက်ပထမဦးဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 2016 ခုနှစ်တွင်ကုမ္ပဏီအပါဝင်ယူအစဉ်အဆက်ကိုပထမဦးဆုံးခဲ့ တက်စလာပြိုင်ပွဲ လျှပ်စစ် Scooter အတူ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ “ အစိမ်းရောင်” mobility တစ်ဦးရဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်စေဆက်ကပ်အပ်နှံသည်။
အဆိုပါ Scooter 40 km / h နဲ့တက်မှ 195 ကီလိုဂရမ်တစ်ဝန်တင်ဆောင်စဉ် 20 °ကုန်းတက်မောင်းဖို့စွမ်းရည်အများဆုံးမြန်နှုန်းများအတွက် 2,000 ဝပ်လျှပ်စစ်မော်တာရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter နှစ်ခု 72 Volt, 100-120 ကီလိုမီတာအကွာအဝေး 20 Ah ကဆီလီကွန်နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးဂျယ်ဘက်ထရီရှိပါတယ်။ အဆိုပါတာဝန်ခံအချိန် 8-10 နာရီဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter တစ်ခုတည်းဘက်ထရီနှင့် 60 ကီလိုမီတာအကွာအဝေးနှင့်အတူတစ်ဦး Lite ဗားရှင်းအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ Scooter အွန်လိုင်းမိန့်ထုတ်နိုင်ပြီးကမ္ဘာတွင်ကျယ်ပြန့်တင်ပို့နေသည်။
ကို 2020 Motogrini ကိုမော်ဒယ်များ
Motogrini ဆိုင်ကယ်အားလုံးကို filter ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်တွင်ကြည့်ပါ။
Milentija Popovica 9
Phone: +381 11 22 06 100
+381 66 22 06 10 (VIBER)
ထိုကဲ့သို့သော www.uship.com ကို, အ Scooter နိုင်ငံတကာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖြစ်ခေတ်မီပလက်ဖောင်းအသုံးပြုခြင်းကို 100.000ထက်လျော့နည်းကုန်ကျလိမ့်မည်။
Uship အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်မဟုတ်ရင်ဖြုန်းအာကာသ၏အသုံးပြုမှုကိုအောင်ကဖြစ်နိုင်သမျှစေသည်။ ကို Myanmar အလားတူန်ဆောင်မှုများရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။
လျှပ်စစ်မော်တာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမလိုအပ်ပါဘူးနှင့်အခြေခံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုထိုသို့တကမ္ဘာလုံး 14,000 ကျော်တည်နေရာနှင့်အတူပုံမှန် Scooter ကားဂိုဒေါင်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောကို Bosch E-scooter Serviceအဖြစ်ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုပေးသုံးစွဲဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ (Bosch ရဲ့လျှပ်စစ်မော်တာ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်) ။
အရှိန် အားလုံး25 နှင့် 45 km / h25 km / h45 km / hမော်တော်ဆိုင်ကယ်
min Range အားလုံး
min ပါဝါ အားလုံး
Filter ကို Reset
ကို အတွက်ရောင်းသူ / တင်သွင်းသူ
အကြိုက်ဆုံး filter တစ်ခုဖန်တီးရန် ခလုတ်ကိုသုံးပါ။
⭐ ဂူးဂဲလ် Myanmar တွင်ရှာဖွေမှုရေပန်းစားမှုအပေါ် အခြေခံ၍ စီထားသည်။
ဇူလိုင် 5, 2020 (နောက်ဆုံးသတင်း)
လျော့နည်းလေထုညစ်ညမ်းမှု? ကို mm.e-scooter.co မှာစေတနာ့ဝန်ထမ်းဖြစ်လာသည်။
ဒီလမ်းညွှန် +200 နိုင်ငံများရှိဝယ်လက်ရောက်ရှိနှင့်သန့်ရှင်းသော mobility မြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးသည်။ [ပိုများသောအင်ဖို]
disc ဘရိတ်: လေထုညစ်ညမ်းမှု
Disc ဘရိတ်ခြင်းဖြင့်လေထုညစ်ညမ်းမှု များစွာသောလူလေထုညစ်ညမ်းမှု၏အရင်းအမြစ်ဖြစ် disc ကိုဘရိတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားဘယ်တော့မှနေစဉ်စံကားဖြင့်စုစုပေါင်းထုတ်လွှတ်မှု၏ 20 % ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အစွန်အဖျား? ကို info@e-scooter.co ။
ကျနော်တို့ Google Air View အတွက်ကို ကျန်းမာမြို့လေထု ၏ promotor ဖြစ်ကြသည်။
© 2020 mm.e-scooter.co